Filtrer les éléments par date : vendredi, 16 août 2019
vendredi, 16 août 2019 19:27
Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena: Lanonana roa sosona eto Ambositra
Eo ny lanonana ara-miaramila nanaovana ny fifamindram-pahefana ny komandin'ny vondrom-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena Faritra Amoron'i Mania ; teo koa ny lanonana famoahana ireo mpianatra zandary andiany faha-74 miisa 1195.
vendredi, 16 août 2019 13:04
Maroantsetra: Manjaka ny varomaizina amin’ny solika, 6000 Ar ny litatra
Mampijaly ny mpanjifa ny solika eto Maroantsetra. Mitsitapitapy ny famoahana solika amin’ireo toby mpaninjara misy eto an-toerana. Tsy mazava ny olana fa matetika mihidy. Rehefa misokatra indray dia filaharam-be eny amin'ireo toby mpaninjara ary voafetra ny ora itsinjaran’izy ireo solika, voafetra ihany koa ny fatran’ny solika azo vidina amin’ny vidiny ara-dalàna.
Manjaka ny varomaizina, 6000 Ariary ny litatry ny lasantsy. Saika feno mpivarotra eny anelanelantrano eto Maroantsetra. Avy aiza ny fiaviany ?
vendredi, 16 août 2019 12:57
Toamasina: Zaza tsy ampy taona mpangalatra moto
Tovolahy kely vao herotrerony no saron’ny Polisy avy ao amin’ny « Commissariat » Mangarano Toamasina, nangalatra moto ety amin'ny faritra Mangarivotra. Mampiasa lakile karazany maro izy ireo.
Lehilahy sendra niditra « cyber » no lasibatr’ireto tovolahy ireto. Tany amin'ny Parcelle 21/51 Mangarivotra vao tratra izy ireo niaraka tamin'ilay moto.
Natolotra ny sampan-draharaha misahana ny Zaza tsy ampy taona izy ireo, nandray an-tanana ny fanadihadiana.
vendredi, 16 août 2019 11:43
Tsarahonenana Ampandrianomby: « Camion citerne » no hizaràna rano ho an'ny mponina
Mitohy ny fizaràna rano amin’ny alalan’ny « camion citerne » ho an'ny mponina eny Tsarahonenana Ampandrianomby – Antananarivo, hamahana ny olan'ny famatsiana rano. Hapetraka maharitra eny amin'ireo toerana rehetra misy olana amin'ny famatsiana rano eto andrenivohitra ireo sinibendrano hahafahan'ny mponina manana rano..
Tafiditra anatin'ny faritra Atsinanan'Antananarivo izay hisitraka ny rano avy amin'ny toby eny Amoronakona ny faritra Tsarahonenana.
vendredi, 16 août 2019 11:29
Ambondromamy: Tra-tehaka tovolahy iray mpisera rongony
Tovolahy 01 sahabo 19 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP Ambondromamy ny alin’ny talata hifoha alarobia faha 14 aogositra 2019 teo noho ny fitondrana rongony.
Noho ny firongatry ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina aty amin’ny faritra Betsiboka, dia manatanteraka Barrage de sécurité ny polisy aty an-toerana, entina hiadiana amin’ny fivezivezen’ireo zava-mahadomelina ireo.
Tokony ho tamin’ny 01 ora maraina no nisy fiara 01 nosakanan’ny polisy teto Ambondromamy rehefa avy nahazo vaovao avy amina tsara sitrapo izy ireo mahakasika ny tovolahy 01 izay mpitatitra rongony mandeha amin’io fiara io.
Rehefa nosavaina ilay fiara dia tratra tao tokoa ilay tovolahy, nosavaina avy hatrany ny entany, ka dia rongony 36 fatotra lehibe, tombanana ho milanja 10 kilao no tra-tehaka.
vendredi, 16 août 2019 11:01
Ministeran’ny Filaminam-Bahoaka: Fifamindram-pitantanana
Lanonana 03 sosona no notanterahina teto anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka ny alarobia faha 14 aogositra 2019 teo, dia ny fifamindram-pitantanana teo anivon’ny DRH (Direction des Ressources Humaines), ny DPJ (Direction de la Police Judiciaire) ary ny DIGS (Direction de l’Inspection Générale des Services).
Arak’izany dia voatendry ho eo amin’ny toeran’ny Directeur des Ressources Humaines ny Commissaire Divisionnaire de Police RAKOTOMAVO Roger Henri, nisolo toerana ny Contrôleur Général de Police RAJAONARISON José Andrianasolo.
Voatendry ho Directeur de la Police Judiciaire ihany koa ny Commissaire Principal de Police SERALY Hercule, nisolo toerana ny Contrôleur Général de Police ANDRIANIRINA Alain Bruno.
Ary voatendry ho Directeur de l’Inspection Générale des Services eto anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-Bahoaka kosa ny Commissaire Principal de Police RANDRIANIRINA Manahy, nisolo toerana ny Commissaire Principal de Police RAKOTONDRASOA Jean de Matha.
vendredi, 16 août 2019 09:00
Sakaraha: Tsy mandry fahalemana ny tanàna
Vao harivariva milenti-masoandro dia efa fitaintainana ny an’ny mponina amin’ny tsy fandriampahalemana eto an-tanàna. Manao ny ataony ireo mpanao sintomahery, ny herisetra amin’ny endriny samihafa, tato ho ato aza misy koa ny mpidaroka amin’ny « bare à mine ».
Manao ny asany ny mpitandro ny filaminana, etsy ankilany anefa ireo jiolahy mampihorohoro ka mampametra-panontaniana ny mponina sy anairan’izy ireo ny mpitondra mba hamerenana amin’ny laoniny ny fandriampahalemana eto Sakaraha sy ny manodidina, izay manomboka miantraika amin’ny fiharian’ny mponina.
vendredi, 16 août 2019 08:52
Mahajanga: Mandroso ny ady amin’ny kolikoly
Notontosaina tao amin’ny « Bloc Administratif », ny 09 aogositra 2019 teo, ny atrik’asa sy fihaonam-be ho an’ireo mpikambana amin’ny « Cellule anti-corruption » teto Mahajanga.
Nanamarika ny Prefen’i Mahajanga, raha nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ity atrik’asa ity, fa « efa mandroso ny ady amin’ny kolikoly eto Mahajanga ». Efa nanamafy ny fandraisany anjara feno amin’ny ady amin’ny kolikoly ny Prefektioran’i Mahajanga tamin’ny alalan’ny famoahany ny « Arrêté préfectoral » mametraka ny tsy maintsy hifidianan’ireo Sampandraharaham-panjakana isan-tsokajiny ny mpikambana ao amin’ny « Cellule anti-corruption »-n’izy ireo avy sy ny hametrahana « Cellule anti-corruption » iray eo amin’ny Prefektioran’i Mahajanga.